Natiijadda Doorashadda Kenya Oo Lagu Dhawaaqay iyo taageerayaasha mucaaridka oo dibadbaxyo rabshada wata ka sameeyay caasimada | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Natiijadda Doorashadda Kenya Oo Lagu Dhawaaqay iyo taageerayaasha mucaaridka oo dibadbaxyo rabshada wata ka sameeyay caasimada
Nairobi (SDWO): Natiijadda doorashadii guud ee dalka Kenya ka dhacday Salaasadii ina dhaaftay ayaa goor dhawayd si rasmi ah loo shaacinayay in kursiga madaxweynimo uu ku guulaystay hogaamiyaha xisbiga Jubilee Uhuru Kenyatta.
Gudiga doorashooyinka Kenya IEBC oo xarunta Bomas ee magaaladda Nairobi goor dhawayd kaga dhawaaqay natiijadda kama danbaysta ah ayaa sheegay in Uhuru Kenyatta, uu guulaystay.
Madaxweynaha markii labaad dib loo doortay ee Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweyne ku-xigeenkiisa, wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo masuuliyiin kale ayaa joogay goobta natiijadda lagaga dhawaaqayay ee Bomas.
Hogaamiyaha is-baahaysiga mucaaridka NASA Ra’ila Odinga, iyo saraakiil kale oo ka tirsan xisbigaasi ayaa ka baxay xarunta guud ee doorashadda lagaga dhawaaqay, iyagoo hor-dhicii natiijadda doorashadaasi qaadacay, isla markaana ku tilmaamay in aanay ku qanacsanayn si wax loo waddo.
Doorashadan oo natiijadeedda si weyn ay wada sugeen dadka reer Kenya, ayaa markii lagu dhawaaqay magaalooyin ka mid ah dalka Kenya gaar ahaana kuwa ay taageereyaasha madaxweyne Kenyatta ku badan yihiin waxaa ka bilaabmay damaashaad iyo dabal-degyo.
Halka magaalooyinka ay sida weyn ugu xoog badan yihiin taageereyaasha hogaamiyaha is-bahaysiga mucaaridka Raila Odinga oo ay ka mid tahay Kisumu iyagna ay dhigayaan mudaharaadyo ay ku diidan yihiin natiijadda ay soo saareen gudiga doorashooyinka.
Madaxweyne Kenyatta ayaa kadib markii lagu dhawaaqay natiijadda khudbad u jeediyay dadweynaha reer Kenya. Waaxaanu balan qaaday in uu si isku mid ah ugu shaqayn doono bulshadda reer Kenya.
Geesta kale guud ahaanba waxaa si aad ah loo adkeeyay amaanka magaalooyinka dalka Kenya, wixii ka danbeeyay markii ay soo baxday natiijadda hor dhaca ah ee doorshadda oo sheegaysa in Uhuru Kenyatta uu ku horeeyo codad badan.
Waxaana la hawl-geliyay kumanaan ciidamadda kala duwan ah, iyadoo loo diyaariyay in ay ka hor tagaan rebshado ka yimaadda dhinaca taageereyaasha mucaaridka.
Dhinaca kale goob joogeyaasha ka socday beesha caalamka ee indho-indhaynayay doorashadda Kenya ayaa sheegay in aanay jirin wax is-daba marin iyo musuq maasuq dhacay, maalintii ay codayntu socotay.